Trump 2024? President Hints at Possible Comeback - Communal News: Online Business, Wholesale & B2B Marketplace News
ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန် Donald Trump, သတင်းဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး, ရီပတ်ဘလီကန်
ရှေ့နေချုပ်ဘားရ်ကပြောကြားရာတွင်“ ယနေ့ထိရွေးကောက်ပွဲတွင်ကွဲပြားသောရလဒ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့်လိမ်လည်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရသေးပါ။ ”
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဘယ်အရာကိုမျှတစ်ကျော့ပြန်လေလံအတွက် Donald Trump ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုတားဆီး။
သမ္မတ Donald Trump ၏တစ်ကျော့ပြန်လာမည့်လေလံဆွဲမှုကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းသည်အနာဂတ်ရီပတ်ဘလီကန်သမ္မတလောင်း၏နယ်ပယ်ကိုအေးခဲစေရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်သမ္မတ Trump အားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှဂျိုးဘိုင်ဒန်ကရိုက်နှက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သမ္မတရာထူးကအရှုံးကိုအလျှော့မပေးခဲ့ဘူး။ ၎င်းအစားသူသည်ရွေးကောက်ပွဲများသည်လိမ်လည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
တွစ်စ်များမှတစ်ဆင့်သမ္မတ Trump အနေနှင့်ရွေးကောက်ပွဲများသည်သူ၏ပြိုင်ဘက်၏အကျိုးအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုသူကဆိုခဲ့ပြီးရလဒ်မှာမှောက်လှန်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် Tweet လုပ်ခဲ့ပြီးခဲ့သည့်လကဂျိုးဘိုင်ဒန်၏အောင်ပွဲကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည့်သူများစွာအနက်မှတစ်ခုမှာ
သူကအနိုင်ရခဲ့သည်။ Fake & Silent Media, Fake & Silent Media, တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မီသည့်ရေဒီယိုလက်ဝဲပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ Dominion မှနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခံထားရသော Bum ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့်မဲပေးခွင့်မပြုပါ။ & နောက်ထပ်!"
သမ္မတ Trump သည်အဓိကယုံကြည်စိတ်ချရသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည့်နောက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစွပ်စွဲချက်များကိုအကြီးအကျယ်ထိုးနှက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်ဝီလျံဘားကရွေးကောက်ပွဲများသည်လိမ်လည်မှုများနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်ဟုစွပ်စွဲပြောဆိုမှုများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Associated Press သို့ပြောကြားခြင်း၊ ရှေ့နေချုပ် Barr ကပြောကြားခဲ့သည် “ ယနေ့အထိရွေးကောက်ပွဲတွင်ကွဲပြားသောရလဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့်လိမ်လည်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရသေးပါ။ ” သူကထပ်မံပြောကြားသည်မှာရာဇ ၀ တ်မှုတရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုပုံမှန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနေသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ရာဇ ၀ တ်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်အခြေခံရှိသင့်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့သည်။
“ လိမ်လည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဆိုမှုအများစုဟာအခြေအနေတစ်ခု၊ သရုပ်ဆောင်သူ၊ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ပြေးကြပြီ။ သူတို့သည်ပြေးကြပြီ။ သူကဆက်ပြောသည်မှာ“ တချို့ကကျယ်ပြန့်ပြီးမဲထောင်ပေါင်းများစွာကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအပေါ်ကိုတက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြသည်။
Associated Press သို့ပြောကြားရာတွင် Barr က“ ရွေးကောက်ပွဲမှာမတူညီတဲ့ရလဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအပေါ်လိမ်လည်မှုကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူး” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Sky News ၏အဆိုအရDonald Trump သည်သူ၏ဆွေမျိုးနီးစပ်သူများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသူများနှင့်မစ္စတာဘီဒင်အားကျိန်ဆိုသည့်နေ့ဖြစ်သော ၂၀၂၄ အတွက်သူ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်ခြင်းကိုကြေငြာရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည် နောက်ဆုံးတော့။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဘယ်အရာကိုမျှတစ်ကျော့ပြန်လေလံအတွက် Donald Trump ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုတားဆီး။ ဒါဟာအနာဂတ်အနာဂတ်ရီပတ်ဘလီကန်သမ္မတရာထူးအတွက်နယ်ပယ်ကိုအေးခဲစေဖို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်။ ယူအက်စ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်သမ္မတအားသက်တမ်းနှစ်ခုထက် ပို၍ မယူရန်တားမြစ်ထားသော်လည်း၊
၁၉ ရာစုအကုန်တွင် Grover Cleveland လောင်းကစားတွင်လူတစ်ယောက်သာအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၈၈၄ တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီး ၁၈၈၈ တွင်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ၁၈၉၂ တွင်ထပ်မံရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။ သမိုင်းစာအုပ်များတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၂၂ နှင့် ၂၄ ခုမြောက်သမ္မတဖြစ်သည်။
Grover Cleveland သည်သူ၏ဒုတိယသက်တမ်းအစတွင် ၅၆ နှစ်ရှိခဲ့သည်။ Donald Trump, သူလမ်းကြောင်းယူသင့်တယ်, သို့သော် 56 မှာအများကြီးအဟောင်းတွေပါလိမ့်မယ်။
အများပိုင်သတင်း Donald Trump ရွေးကောက်ပွဲ 2024 ဂျိုးဘိုင်ဒန် ရီပတ်ဘလစ်ကန်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ - တရားရုံးချုပ်မှဆယ်ကျော်သက်များဖြတ်သန်းမှုမှူများ
National Tax Security Awareness Week3- IRS မှတစ်နိုင်ငံလုံးရှိအခွန်ထမ်းများထံမှအထောက်အထားကာကွယ်မှု PIN Opt-In အစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။